Zambia: Pretra Katolika Voaroaka Noho Ny Toriteny Momba Ny ‘Fahantrana’ Nataony · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 15 Aogositra 2012 9:54 GMT
Vakio amin'ny teny Dansk, Español, اردو, Français, English
Pretra Katolika avy amin’ny paroasy ao amin’ny faritany Ambanivohitra ao Atsinanan’i Zambia no noroahin’ny governemantan’i Zambia hivoaka ny fari-pirenena noho ny sermona nataony indray Alahady izay nilazany fa miha-manankarena ny mpanankarena eto amin’ny firenena ary miha-mahantra hatrany kosa ny mahantra
Nalaina tao Lundazi i Fr.Viateur Banyangandora 40 taona, talohan’ny nametrahana azy tao an-drenivohitra, Lusaka, 800 km mahery miala eo amin’ny Sampan-draharaha mpitsikilovana ao Zambia izay fantatra amin’ny fanafohezan-teny hoe OP, na “Office of the President” na Biraon’ny Filoha, avy eo natolotra ny minisitry ny fifindra-monina izy izay nitarika tamin’ny fanaovana sesintany azy tao amin’ny firenena nahaterahany, ao Rwanda.
Minisitry ny Atitany Edgar Lungu, nanambara ny fanesorana ilay pretra, hoy ny fanambarany
Fantatra fa mampidi-doza ho an’ny fandriampahalemana sy ny filaminana tsara misy eto Zambia ny fitondratena nataon’i Fr. Banyangandora, izay mifanohitra amin’ny fitsipika andininy faha-39(2) momba ny Lalànan’ny fifindra-monina sy ny sesintany, laharana faha18, 2010.
Tamin’ny fihetseham-po isan-karazany no nandraisan’ny mpiserasera Zambiana ny fisamborana azy voalohany sy ny fandorahana azy avy eo , izay nahita fa nanampy betsaka ny governemantan’ny PF niakatra teo amin’ny fitondrana ireo Pretra Katolika sasany tamin’ny fampielezan-kevitra nitarika ny faharesen’ny fitondrana teo aloha, ny antoko MMD. Nilaza ny filoha Sata, Katolika, nandritra ny fotoam-piangonana vao maraimbe fa araka ny fitsipika ara-baiboly no hitondrana an’i Zambia.
Filoha Sata mivavaka ao am-piangonana Katolika iray. Sary tao amin'ny Zambia Watchdog.
Naneho hevitra momba ny fanaovana sesitany tao amin’ny Watchdog Zambiana, Mpanao fanadihadiana ara-politika nanoratra hoe: [tsy ahitana rohy maharitra sy fanehoan-kevitra manokana ataon’ny ny olona]:
didy manaraka ny [faha-] 10 raha ny fahafantarako? Mandroaka ny olon’Andriamanitra?
Taminà fanehoa-kevitra hafa, Abana Ba Mfumu nanoratra hoe:
Nahoana no avelan-tsika hitsabaka amin’ny raharaha anatin’ny firenena ny vahiny, aoka hijanona ho lesona ho an’ny vahiny hafa tsy tia mampangina ny vavany izany!!!!
Valin-teny avy amin’ny Apologista Kolonialy:
@Abana Bafumu. Anisan’ny olona faly sy mitehaka ihany koa ianao rehefa milaza zavatra tsy mifanaraka amin’ny sitrapon’ny MMD i Bishop Duffy sy ny Radio Ichengelo preist. Karazan’olona mpandany andro ao Zambia ny olona tahaka anao. Mba mampisehoa fahatsoram-po sy fahamatorana kely fotsiny.
Inona kosa no lazaina ho toy ny vavaka, Mwape nanoratra hoe:
Ny efa naloany ihany no tohanan’ny Katolika. Samy mahafantatra ny tsirairay hoe karazana hyena tahaka ny ahoana i Sata kanefa mbola manohana azy sy manompo azy toy ny mpanjaka ihany ny Katolika. Andeha hanaraka hatrany ny tohin’ny zava-miseho mampalahelo, Katolika aho saingy mahasanganehana ahy tanteraka ny fanohanan’ny fiangonako an’i Sata. Andriamanitra o! mijaly loatra izahay tao anatin’izay volana vitsy izay, niharatsy tanteraka ny toe-draharaha hatramin’ny naha teo amin’ny fitondrana an’i Sata. Mangataka ny fanahinao masina izahay mba hanampy an’i Sata hitondra ny vahoakany amin’ny fanajana ny didy folo. Hanome faminaniana tsara ho an’ireo mpitarika Katolika koa anie Ianao mba hanampy azy ireo amin’ny famantarana ny tsara ho an’ny vahoakanao. Mety mitaky andro vitsy na aman-taona izany saingy mino aho Tompo o! fa hoavy hanampy anay ianao. Tahio ireo zanakao noho ny amin’ny governemanta. Angatahiko izany rehetra amin’ny alalan’i Kristy Mpamonjy antsika izay mitoetra sy manjaka aminao. Amen!
Tamin’ny tantara farany momba ny fisamborana ilay pretra, Hoy I Saulos nanoratra:
Voahozona ireo izay manenjika ireo Pasitera hita fa mitoriteny marina. Hoavy ny andro hahafantarana ny marina rehetra ka ho voatosika any ivelany toy ny rajako tsy nahatazona ratsan-kazo ka nianjera tamin’ny tany tsy nahitam-panafody ny governemanta ankehitriny. Ry namana OP, lazao amin’Andriamatoa Cobra ny marina fa aza mandainga amin’ny filohanay, mbola tsy am-perinasa izy. Eritrereto hoe nanao fifidianana ampahany isika, mihevitra ve ianao fa mbola ho tafita ny PF. Andeha hatrehantsika ny zava-misy ry vahoaka eto amin’ny firenena
Ninny tia esoeso nanoratra hoe:
Roahy any Rwanda ireo pretra Katolika. Ahoana no hasahiany miresaka fahantrana ao Zambia? Tsy mahita ny harenan’ny filoha, sy ilay mpanankarena Guy Scott [Filoha lefitra] , ilay mpanankarena kabimba [sekretera jeneraly ny fitondrana PF], ilay mpanankarena GBM [Minisitry ny Fiarovana], mpanankarena richie Rich. Aiza ny fahantrana ao zambia? Mba ao an-tsainao ve izany ry pretra mampalahelo. Miverena mba hiaina ny fahantrana ao amin’ny firenenao. Firenena manankarena i Zambia. Saranga roa manankarena sy tena manankarena no ao amin’ny firenenay!
Tao amin’ny Facebook, Waziona Nkhwekwe nanoratra hoe:
Andriamatoa Filoha, raha samborina ireo pasitera noho ny toriteny na fananarana ataony. Manontany aho hoe iza no hovonjena ato amin’ny firenena? Mianatra mitondra ny firenena lavitry ny fandrahonana sy ny fampitahorana ny governemanta Pf. Efa nampiasaina teto amin’ny firenena izany fomba izany teo aloha fa tsy nahitam-bokany mahafa-po!
Nalefa tweet niverimberina imbetsaka ny tantara momba ny fisamborana ireo pretra sy ny fandroahana azy avy eo, ary niteraka horohoro ihany koa:
@anglissima: WTF! #Zambia Nosamborina ilay Pretra noho ny toriteniny hoe “miha-manankarena ny mpanankarena, miha-fadiranovana ny mahantra http://zambianwatchdog.com/2012/08/01/op- … via @GNdhlovu